Soo dejisan WinZip 3.3 – Android – Vessoft
WinZip – software ah in ay la shaqeeyaan archives of qaabab kala duwan. WinZip awood u si aad u eegto, la abuuro oo ka soo fagid archives. Software The kuu ogolaanayaa inaad si uu u furo ZIP faylasha Windows XP ama u abuurin wax u ammaan kaydinta xogta. WinZip taageertaa nuqul ka mid ah waxyaabaha unpacked in clipboard ee lifaaqaya ah si degdeg ah u emails ama codsiyada kala duwan. Sidoo kale software ka kooban yahay tababare dhisay-in file in caleenta ama furan PDF files, images, APK codsiyada iyo dukumentiyada Microsoft Office. WinZip ayaa interface ku ogaado iyo fududahay in la isticmaalo.
Taageerada buugagga taariikhda oo qaabab kala duwan
La shaqeeyaa files-lo
Waxaa la dhisay-in tababaraha file
Oo iridaha u faylasha iyo waraaqaha oo kala duwan